အသက်သေဆုံးတဲ့အထိ ပြင်းထန်တဲ့ ဝက်တုပ်ကွေးကို ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်ကြမလဲ - For her Myanmar
လေရှူရင်းနဲ့တောင် ကူးစက်နိုင်တာမို့ အထူးသတိရှိစေချင်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ…
Swine Flu လို့ခေါ်တဲ့ ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါ တစ်ဖန်ပေါ်လာပြန်ပြီ ယောင်းတို့ရေ ။ တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ သံသယရှိသူ အယောက်၂၀ရှိပြီး ၃ဦးကတော့ သေဆုံးသွားပါပြီ။ ဆရာဝန်တွေကတော့ သံသယရှိသူအရေအတွက်က ဒီထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝက်တုပ်ကွေးရန်ကနေ ကာကွယ်ဖို့ ဆောင်ရန် / ရှောင်ရန်တွေ သိထားသင့်တာလေးတွေ ဝေမျှပေးပါရစေ…
ဒီရောဂါဟာ H1N1 ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါဖြစ်ပြီး ဝက်တွေမှာ တွေ့ရတဲ့ virus ဖြစ်တာမို့ ဝက်တုပ်ကွေးလို့ ခေါ်ကြတာပါ။ ဒီ virus ဟာ ဝက်တွေသာမက ကျန်းမာတဲ့သူတွေကော ကိုယ်ခံအားနည်းသူတွေပါ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်နော်…
Swine flu ဖြစ်နေတဲ့ နေရာကို သွားမိလို့ ကူးစက်လာတာ၊ ရောဂါပိုးရှိနေတဲ့လူနဲ့ ထိတွေ့လို့ ကူးတာ၊ တိရစ္ဆာန်ကနေတစ်ဆင့် ကူးစက်တာ စသဖြင့် အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဝက်မွေးထားတဲ့သူတွေကတော့ ကူးစက်နိုင်ခြေအမြင့်ဆုံးပါပဲ။ လူထူထပ်တဲ့ bus ကား ခဏခဏစီးနေရတဲ့ သူတွေ၊ ဆေးရုံဆေးခန်း မကြာခဏသွားနေရသူတွေ၊ အနီးအနား နေထိုင်သူတွေလည်း ကူးစက်နိုင်ခြေရှိတာမို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။
Swine flu ဟာ သာမန်တုပ်ကွေးနဲ့ အတော်လေး ဆင်တူပါတယ်။ အဖျားတက်တာ (တစ်ခါတလေ မဖျားပါဘူး)၊ လည်ချောင်းနာတာ၊ တုန်ခိုက်နေတာ၊ ချောင်းဆိုးတာ၊ နှာစေးပြီး နှာခေါင်းနီမြန်းတာ၊ မျက်လုံးတွေနီတာ၊ မျက်ရည်ယိုတာ၊ တစ်ကိုယ်လုံးကိုက်ခဲတာ၊ အလွယ်တကူ မောပန်းတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ အသက်ရှုကြပ်တာ၊ ဝမ်းလျှောတာ၊ ပျို့အန်ချင်၊ အန်ထွက်တာ စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရပြီး ၃ရက်အတွင်း ဒီလို လက္ခဏာတွေကို ပြလာမှာပါ။
ဒါကြောင့် မဖျားရင်တောင် အပေါ်မှာဝေမျှထားတဲ့ တုပ်ကွေးလက္ခဏာတွေ ပြလာတာနဲ့ ဝက်တုပ်ကွေးလား ရိုးရိုးတုပ်ကွေးလား သိရအောင် အရင်ဆုံး သေချာစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
Related Article >>> ဂရုမထားလိုက်မိတာနဲ့ ကိုယ့်အတွက် သေမင်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးကို ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲ?
၁. ဖြစ်နိုင်ရင် ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။ ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားခြင်းဖြင့် ဝက်တုပ်ကွေးကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ မနှစ်က ထိုးထားရင်လည်း ဒီနှစ်ထပ်ထိုးသင့်ပါတယ်နော်။ ကာကွယ်ဆေးက တစ်နှစ်ပဲ ခံလို့ပါ။ ခုချိန်ထိတော့ ကာကွယ်ဆေး တစ်လုံးကို ၂သောင်းဝန်းကျင်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ကြာရင်တော့ ဈေးတက်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးရုံဆေးခန်းအများစုမှာ ထိုးနိုင်ပါတယ် ယောင်းရေ။
၂. နှာချေ/ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ တစ်ရှူး(သို့) လက်ကိုင်ပုဝါနဲ့အုပ်ပါ။ တံတောင်ဆစ်ထဲ ချောင်းဆိုးပါ။ သုံးစွဲပြီး တစ်ရှူးကို ချက်ချင်းစွန့်ပစ်ပါ။
အပြင်ထွက်ရင် တစ်ခါသုံး mask ကို သုံးပါ။ တစ်ခါသုံး Maskတွေကို သုံးပြီးတာနဲ့ သေချာစွန့်ပစ်ပါ။ ပြန်သုံးတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူးနော်။ ဒါကပိုပြီး အန္တရာယ်များပါတယ်။
၃. ဖျားနေရင် အိမ်မှာပဲနေပါ။ တခြားသူတွေကို ပါ ကူးစက်စေနိုင်တာမို့ အပြင်မထွက်ပါနဲ့ဦးနော်။ အဖျားပျောက်ပြီး ၂၄နာရီကြာမှ အပြင်ထွက်သင့်ပါတယ်။
၄. ယောင်းတို့အိမ်မှာ အသက်၅နှစ်အောက်ကလေးတွေ၊ ၆၅နှစ်အထက် လူကြီးတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တွေ၊ ပန်းနာရင်ကြပ်ရှိသူတွေ ရှိရင်တော့ လူထူထပ်တဲ့နေရာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး မသွားစေဘဲ ရှောင်ခိုင်းပါ။
၅. လက်ကို မကြာမခဏဆေးကြောပါ။ Alcohol ပါတဲ့ လက်သန့်စင်ရည်ကို ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
၆. ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ လူရဲ့ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်နဲ့ မျက်လုံးကနေ တစ်ဆင့် ဝင်ရောက် ကူးစက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မျက်လုံး၊ နှာခေါင်းနဲ့ မျက်စိနေရာကို ခဏခဏမထိတွေ့ဖို့၊ ထိတွေ့တဲ့အခါလည်း လက်ဆေးပြီးမှသာ ထိတွေ့ဖို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။
ကဲ.. ယောင်းတို့ရေ ဝက်တုပ်ကွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကို သိရှိသွားပြီဆိုရင် ယောင်းတို့မိသားစု ၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်.. ယောင်းတို့အားလုံး ရောဂါဘယတွေ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။
Reference links: mayoclinic.org , stlouischildren.org
လရှေူရငျးနဲ့တောငျ ကူးစကျနိုငျတာမို့ အထူးသတိရှိစခေငျြပါတယျ ယောငျးတို့ရေ…
Swine Flu လို့ချေါတဲ့ ဝကျတုပျကှေးရောဂါ တဈဖနျပျေါလာပွနျပွီ ယောငျးတို့ရေ ။ တရားဝငျ သတငျးထုတျပွနျခကျြတှအေရ သံသယရှိသူ အယောကျ၂၀ရှိပွီး ၃ဦးကတော့ သဆေုံးသှားပါပွီ။ ဆရာဝနျတှကေတော့ သံသယရှိသူအရအေတှကျက ဒီထကျပိုမြားနိုငျတယျလို့ ခနျ့မှနျးနကွေပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဝကျတုပျကှေးရနျကနေ ကာကှယျဖို့ ဆောငျရနျ / ရှောငျရနျတှေ သိထားသငျ့တာလေးတှေ ဝမြှေပေးပါရစေ…
ဒီရောဂါဟာ H1N1 ဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ ဖွဈတဲ့ ရောဂါဖွဈပွီး ဝကျတှမှော တှရေ့တဲ့ virus ဖွဈတာမို့ ဝကျတုပျကှေးလို့ ချေါကွတာပါ။ ဒီ virus ဟာ ဝကျတှသောမက ကနျြးမာတဲ့သူတှကေော ကိုယျခံအားနညျးသူတှပေါ ကူးစကျနိုငျပါတယျနျော…
Swine flu ဖွဈနတေဲ့ နရောကို သှားမိလို့ ကူးစကျလာတာ၊ ရောဂါပိုးရှိနတေဲ့လူနဲ့ ထိတှလေို့ ကူးတာ၊ တိရစ်ဆာနျကနတေဈဆငျ့ ကူးစကျတာ စသဖွငျ့ အမြိုးမြိုး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဝကျမှေးထားတဲ့သူတှကေတော့ ကူးစကျနိုငျခွအေမွငျ့ဆုံးပါပဲ။ လူထူထပျတဲ့ bus ကား ခဏခဏစီးနရေတဲ့ သူတှေ၊ ဆေးရုံဆေးခနျး မကွာခဏသှားနရေသူတှေ၊ အနီးအနား နထေိုငျသူတှလေညျး ကူးစကျနိုငျခွရှေိတာမို့ သတိထားသငျ့ပါတယျ။
Swine flu ဟာ သာမနျတုပျကှေးနဲ့ အတျောလေး ဆငျတူပါတယျ။ အဖြားတကျတာ (တဈခါတလေ မဖြားပါဘူး)၊ လညျခြောငျးနာတာ၊ တုနျခိုကျနတော၊ ခြောငျးဆိုးတာ၊ နှာစေးပွီး နှာခေါငျးနီမွနျးတာ၊ မကျြလုံးတှနေီတာ၊ မကျြရညျယိုတာ၊ တဈကိုယျလုံးကိုကျခဲတာ၊ အလှယျတကူ မောပနျးတာ၊ ခေါငျးကိုကျတာ၊ အသကျရှုကွပျတာ၊ ဝမျးလြှောတာ၊ ပြို့အနျခငျြ၊ အနျထှကျတာ စတာတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဝကျတုပျကှေးဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရပွီး ၃ရကျအတှငျး ဒီလို လက်ခဏာတှကေို ပွလာမှာပါ။
ဒါကွောငျ့ မဖြားရငျတောငျ အပျေါမှာဝမြှေထားတဲ့ တုပျကှေးလက်ခဏာတှေ ပွလာတာနဲ့ ဝကျတုပျကှေးလား ရိုးရိုးတုပျကှေးလား သိရအောငျ အရငျဆုံး သခြောစဈဆေးသငျ့ပါတယျ။
Related Article >>> ဂရုမထားလိုကျမိတာနဲ့ ကိုယျ့အတှကျ သမေငျးဖွဈသှားနိုငျတဲ့ သှေးလှနျတုပျကှေးကို ဘယျလို ကာကှယျကွမလဲ?
၁. ဖွဈနိုငျရငျ ကာကှယျဆေးထိုးပါ။ ကာကှယျဆေး ထိုးထားခွငျးဖွငျ့ ဝကျတုပျကှေးကို ကာကှယျနိုငျပါတယျ။ မနှဈက ထိုးထားရငျလညျး ဒီနှဈထပျထိုးသငျ့ပါတယျနျော။ ကာကှယျဆေးက တဈနှဈပဲ ခံလို့ပါ။ ခုခြိနျထိတော့ ကာကှယျဆေး တဈလုံးကို ၂သောငျးဝနျးကငျြပဲရှိပါသေးတယျ။ ကွာရငျတော့ ဈေးတကျနိုငျပါတယျ။ ဆေးရုံဆေးခနျးအမြားစုမှာ ထိုးနိုငျပါတယျ ယောငျးရေ။
၂. နှာခြေ/ခြောငျးဆိုးတဲ့အခါ တဈရှူး(သို့) လကျကိုငျပုဝါနဲ့အုပျပါ။ တံတောငျဆဈထဲ ခြောငျးဆိုးပါ။ သုံးစှဲပွီး တဈရှူးကို ခကျြခငျြးစှနျ့ပဈပါ။
အပွငျထှကျရငျ တဈခါသုံး mask ကို သုံးပါ။ တဈခါသုံး Maskတှကေို သုံးပွီးတာနဲ့ သခြောစှနျ့ပဈပါ။ ပွနျသုံးတာမြိုး မလုပျသငျ့ပါဘူးနျော။ ဒါကပိုပွီး အန်တရာယျမြားပါတယျ။
၃. ဖြားနရေငျ အိမျမှာပဲနပေါ။ တခွားသူတှကေို ပါ ကူးစကျစနေိုငျတာမို့ အပွငျမထှကျပါနဲ့ဦးနျော။ အဖြားပြောကျပွီး ၂၄နာရီကွာမှ အပွငျထှကျသငျ့ပါတယျ။
၄. ယောငျးတို့အိမျမှာ အသကျ၅နှဈအောကျကလေးတှေ၊ ၆၅နှဈအထကျ လူကွီးတှေ၊ ကိုယျဝနျဆောငျသညျတှေ၊ ပနျးနာရငျကွပျရှိသူတှေ ရှိရငျတော့ လူထူထပျတဲ့နရောတှကေို အတတျနိုငျဆုံး မသှားစဘေဲ ရှောငျခိုငျးပါ။
၅. လကျကို မကွာမခဏဆေးကွောပါ။ Alcohol ပါတဲ့ လကျသနျ့စငျရညျကို ဆောငျထားသငျ့ပါတယျ။
၆. ဗိုငျးရပျဈပိုးဟာ လူရဲ့ နှာခေါငျး၊ ပါးစပျနဲ့ မကျြလုံးကနေ တဈဆငျ့ ဝငျရောကျ ကူးစကျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မကျြလုံး၊ နှာခေါငျးနဲ့ မကျြစိနရောကို ခဏခဏမထိတှဖေို့၊ ထိတှတေဲ့အခါလညျး လကျဆေးပွီးမှသာ ထိတှဖေို့ သတိထားသငျ့ပါတယျ။
ကဲ.. ယောငျးတို့ရေ ဝကျတုပျကှေးနဲ့ပတျသကျပွီး ဆောငျရနျရှောငျရနျတှကေို သိရှိသှားပွီဆိုရငျ ယောငျးတို့မိသားစု ၊ သူငယျခငျြးနဲ့ ပတျဝနျးကငျြကို ပွနျလညျဝမြှေပေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော.. ယောငျးတို့အားလုံး ရောဂါဘယတှေ ကငျးဝေးနိုငျကွပါစေ။
Tags: #health #knowledge, h1n1, Health, Knowledge, swine flu